कसरी फैलिन्छन् महामारी गराउने भाइरसहरू ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २१, २०७७ डा. सन्तोष ढकाल
मानव समुदायले यस्ता महामारी हरेक १० देखि ५० वर्षको अन्तरालमा भोग्दै आइरहेको छ । कुनै महामारी केही महिनामै सकिन्छ भने कुनै केही वर्षसम्म पनि रहन सक्छ । केही महामारी सीमित देशमा मात्र असर गर्न सक्ने हुन्छन् भने कुनैले विश्वमै असर गर्छ । कोरोना महामारी पनि केही समयमा कम भएर जाला तर यसले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा सामाजिक असर धेरै वर्षसम्म रहिरहन्छ ।
कुनै पनि भाइरसले महामारीको रूप लिन निश्चित अवस्था र कारणहरू हुन्छन् । सबैभन्दा पहिले त त्यो भाइरस नयाँ हुनुपर्छ जसले गर्दा मान्छेको शरीरमा त्यसविरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता हुँदैन । त्यसै गरी महामारी बन्न त्यो भाइरस सजिलै एक मान्छेबाट अर्कोमा सर्ने हुनुपर्छ । अहिलेको सार्सकोभ–२ नयाँ भाइरस हो । यसका विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता मान्छेमा थिएन । साथै, यो भाइरस श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्न सक्ने हुनाले छिट्टै फैलन सफल भयो । यसका विरुद्ध कुनै खोप वा औषधि उपलब्ध छैन ।अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएअनुसार सार्सकोभ–२ को स्रोत चमेरो हो । चमेरालगायत अन्य जंगली जनावरमा धेरै भाइरस पाइन्छन् जुन मान्छेमा सरे महामारीको रूप लिन सक्छ । कोरोना मात्र नभई चमेराहरूमा इन्फ्लुएन्जालगायत अन्य धेरै भाइरस भेटिएको अध्ययनले देखाएका छन् । यी भाइरसले चमेरालाई कुनै नोक्सानी गर्दैनन् । यी भाइरस सजिलै अरू जनावर तथा मान्छेमा सर्दैनन् पनि । तर समयक्रममा आनुवंशिक परिवर्तन हुँदा चमेराबाट कुनै जंगली जनावरमा सर्न सक्छन् । तिनबाट बिस्तारै अन्य घरपालुवा जनावर हुँदै मान्छेमा संक्रमण हुन सक्छ । तर यस्तो प्रक्रिया पूरा हुन धेरै वर्ष लाग्ने गर्छ ।
सन् २००२ मा सार्स नाम गरेको कोरोना भाइरस चीनबाट फैलिएको थियो । कम्तीमा २७ देशमा फैलिएको उक्त भाइरसले करिब ८ हजार जनालाई संक्रमित बनायो भने ७ सय ५० भन्दा धेरैको ज्यान लिएको थियो । त्यसै गरी सन् २०१२ मा ‘मर्स’ नाम गरेको अर्को कोरोना भाइरस साउदी अरबमा देखियो । मर्स पनि कम्तीमा २७ देशमा फैलियो । यसको संक्रमण २५ सयजति मान्छेमा पुष्टि भयो भने ज्यान गुमाउनेको संख्या ८५० भन्दा धेरै थियो ।
सार्स र मर्सको स्रोत पनि चमेरो हो । सार्स चमेराबाट नीर बिरालो हुँदै मान्छेमा सरेको मानिन्छ । त्यसै गरी मर्स चमेरोबाट कुनै माध्यमद्वारा उँटमा सरेको र त्यसबाट मान्छेमा सरेको मानिन्छ । अनुसन्धानमा उँटमा मर्स भाइरस मान्छेमा देखिनुभन्दा ३ दशकपहिलेदेखि नै फैलिएको पाइयो । कुनै समयमा जनावरबाट सरेको भए पनि अन्ततः यी भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सजिलै सर्न सक्ने बनेकाले मात्रै महामारीको रूप लिएको हो ।
अहिले फैलिरहेको सार्स कोरोना भाइरस–२ को स्रोत चमेरो भए पनि यो कुन माध्यम हुँदै मान्छेमा सर्‍यो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । केही अनुसन्धानमा सालकको माध्यमबाट यो भाइरस मान्छेमा सरेको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि पुष्टि हुन बाँकी छ । यो भाइरस मान्छेमा सार्न कुनै घरपालुवा जनावरको भूमिका अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसको उत्पत्ति र संक्रमणबारे आगामी दिनमा वैज्ञानिक अनुसन्धानले पक्कै पत्ता लगाउला । अहिलेचाहिँ यसबाट बच्न सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानै परे पनि सामाजिक र व्यक्तिगत दुरी कायम राख्ने, मास्क लगाउने, खोक्दा अथवा हाच्छ्युँ गर्दा नाक, मुख छोप्ने, साबुनपानीले हात धुनेजस्ता उपाय जारी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता महामारी भविष्यमा पनि फैलन सक्ने भएकाले राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान र विकासमा मनग्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भाइरसको पहिचान, डायग्नोस्टिक किट निर्माण, खोप विकास, औषधि उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर देशलाई भविष्यमा फैलन सक्ने महामारीविरुद्ध तयार राख्न अत्यावश्यक छ ।
(डा. ढकाल जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् । उनी इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको संक्रमण र खोपको उपयोगिताको बारे अनुसन्धान गर्छन् । )
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ११:४४
काठमाडौँ — सिटी एक्सप्रेस ट्रान्सफरले बेलायतबाट समेत आफ्नो रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गरेको छ । सिटीले बेलायतको गुवाभा पेसँग सम्झौता गर्दै आफ्नो रेमिट्यान्स कारोबार सुरु गरेको हो ।
सम्झौतापछि बेलायतमा रहेका नेपालीले टर्की, बाकु, एस्टोनिया, रिगा र सेन्ट् पिटर्सबर्गस्थित गुवाभा पेको सेवा प्रयोग गरी नेपाल रकम पठाउन सक्छन् ।